အင်္ဂါနေ့, မေလ 17 2022
CEO တစ်ယောက်က 5G လှိုင်းကို ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲ။
သင်္ဘောသား ခြောက်ဦးသာ သူစတင်သည့် ခရီးကို ပြီးသွားခဲ့သည်။
LA ဂိုဏ်းများသည် တရားထိုင်ကြသည်။
GI သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူမျိုးများနှင့် လက်တွဲလမ်းလျှောက်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဦးဆောင်သော ဂိမ်းအပြောင်းအလဲများ။
လိုချင်သော GI စာရင်းတွင်ရယူပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ၊ သူရဲကောင်းတစ်ဦး၏ ခရီး
ကျွန်ုပ်တို့သည် အိန္ဒိယလူမျိုးများနှင့် အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများ၏ နိုင်ငံခြားခရီးများကို အာရုံစိုက်သည့် အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
မစတင်နိုင်ရင် အောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
GLOBAL အိန္ဒိယ | အထူးသီးသန့်ဇာတ်လမ်းများ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အိန္ဒိယအပြေးသမား၊ Indian Ultramarathoner၊ အားကစား Vikram Sharma မှရေးသားခဲ့သည်
Ultramarathoner Sufiya Sufi Runner သည် တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ကြိမ် ပြေးပြီး စံချိန်များကို ရိုက်ချိုးနေပုံ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အိန္ဒိယလူမှုရေးလုပ်သား၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းရှင် Darshana Ramdev မှရေးသားခဲ့သည်
မေ့နေသောသူများ- Mallika Ghosh ၏ Parinaam Foundation သည် မြို့ပြဆင်းရဲသားများ၏ဘဝတိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်သည်။
Global Indian၊ Green Startups၊ Indian Startups၊ Sustainability Team GI မှရေးသားခဲ့သည်
သွားရင်းလာရင်း ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မှု- ကမ္ဘာမြေကို စိမ်းလန်းစိုပြေစေသော အိန္ဒိယလုပ်ငန်းစုများ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အိန္ဒိယလူမှုရေးလုပ်သား၊ ပရဟိတလုပ်ငန်း Amrita Priya မှရေးသားသည်။
NRI Nasar Thootha ၏ မင်္ဂလာဝတ်စုံဘဏ်ဟောင်းသည် ဆင်းရဲသော မိသားစုမှ သတို့သမီးများအတွက် ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အိန္ဒိယအနုပညာရှင်များ၊ အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှု၊ Indian danseuse၊ Odissi Dancer Namrata Srivastava မှရေးသားခဲ့သည်
Odissi မှ ထပ်ညွှန်းသူ Rekha Tandon သည် အိန္ဒိယဂန္တဝင်အကကို ယောဂအဖြစ် ပြန်လည်ပုံဖော်နေသည်။
စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ၊ အိန္ဒိယ ယူနီကွန် Namrata Srivastava မှရေးသားခဲ့သည်
India's Unicorn Boom- startups တွေက ဂိမ်းကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူငယ် | အထူးသီးသန့်ဇာတ်လမ်းများ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းရှင် Darshana Ramdev မှရေးသားခဲ့သည်
ကွမ်တမ်ဇီဝဗေဒမှ ကလေးအခွင့်အရေးအတွက် အသံတစ်ခုအထိ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းရှင် Mannat Choudhary က ၎င်းအားလုံးကို လုပ်ဆောင်သည်။
စာဖတ်ချိန် -6မိ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမား၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အိန္ဒိယ ရာသီဥတု လှုပ်ရှားသူများ၊ လူမှုရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Namrata Srivastava မှရေးသားခဲ့သည်
လူငယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင် Sanju Soman သည် စံပြကျေးရွာများတည်ဆောက်ရေးတွင် လုပ်ဆောင်နေသည်။
စာဖတ်ချိန် -7မိနစ်
Global Indian Exclusive၊ Indian Changemaker၊ Stem ချစ်သူ Charu Thakur ရေးသားခဲ့သည်
Joy Agrawal- Stem ပညာရေးမှတစ်ဆင့် ဆယ်ကျော်သက်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သူ
စာဖတ်ချိန် -5မိ
စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ အိန္ဒိယစတင်တည်ထောင်သူ Team GI Youth မှရေးသားသည်။
India ၏ Q-Commerce တိုးတက်မှု- Stanford ကျောင်းထွက်သူများ၏ startup၊ Zepto သည် တန်ဖိုးဒေါ်လာ သန်း 900 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
စွန့်ဦးတီထွင်သူ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ ဆယ်ကျော်သက် တီထွင်ဖန်တီးသူ Charu Thakur ရေးသားခဲ့သည်
Prajwal NH- တတ်နိုင်သောနည်းပညာဖြင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဖန်တီးနေသည့် ဆယ်ကျော်သက်တီထွင်သူ
လုပ်ငန်းရှင်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသီးသန့်၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ ဆယ်ကျော်သက်များ၊ အိန္ဒိယလူမှုရေး လုပ်ငန်းရှင် Darshana Ramdev မှရေးသားခဲ့သည်
ကျောင်းသားများအတွက်၊ ကျောင်းသားများအတွက်- ဆယ်ကျော်သက်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်သူ Aryan Maggo ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ လူငယ်များအား ၎င်းတို့၏အလားအလာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ကူညီပေးရန်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယလူမျိုးများ | ပြန်ပေးခြင်း
Indigo ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Rakesh Gangwal သည် IIT Kanpur သို့ ₹100 ကုဋေ လှူဒါန်းခဲ့သည်
Zomato စီအီးအိုသည် ပို့ဆောင်ပေးသည့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ကလေးများအတွက် ပညာရေးအတွက် ₹700 ကုဋေ လှူဒါန်းပါသည်။
Dhruv Lakra ၏ Mirakle Couriers များသည် အကြားအာရုံချို့ယွင်းသူများကို အလုပ်ခန့်ထားပြီး လစဉ် တင်ပို့မှု 65,000 ကို ပို့ဆောင်ပေးသည်
IIT Kanpur ကျောက်ချဉ်သည် ဆေးကျောင်းတည်ထောင်ရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၂.၅ သန်း လှူဒါန်းခဲ့သည်။
NRI Syed Hussaini ၏အဖွဲ့အစည်းသည် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် ငတ်မွတ်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
US အခြေစိုက် IIT BHU ကျောင်းသားဟောင်းများသည် အင်ဂျင်နီယာ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်အတွက် Rs 1.3 ကုဋေ လှူဒါန်းပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | Startups & Entrepreneurs
အိန္ဒိယ စီအီးအို Madhav Sheth သည် စမတ်ဖုန်းလုပ်ငန်းကို 5G ဖြင့် မည်သို့ပြောင်းလဲမည်နည်း။
စာဖတ်ချိန် - 10 မိနစ်
အသက်ကို နှမြောပါ၊ လှံတံကိုသုံးပါ- လုပ်ငန်းရှင် Sharad Ashani သည် ၎င်း၏ သတ်သေမှုဆန့်ကျင်ရေးကိရိယာကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ရူပီးသိန်း ၅၀ ရရှိခဲ့သည်။
Shruti Shibulal ၏ ဧည့်ဝတ်ပြုမှုသည် ကျန်းမာရေးနှင့် စတိုင်လ်ကို မည်ကဲ့သို့ ယူဆောင်လာမည်နည်း။
Ramya Ravi- ဟားဗတ်ပညာတတ် စွန့်ဦးတီထွင်သူသည် သူမ၏အဖွား၏ biryani ၏ မှော်ဆန်မှုကို သယ်ဆောင်လာသည်။
crypto pickle- အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင် Hafez Raman ၏ Athey Nallatha သည် သင့်အား bitcoins များဖြင့် achar ဝယ်နိုင်သည်
PhonePe တည်ထောင်သူ Rahul Chari သည် အိန္ဒိယတွင် fintech ကို တော်လှန်နေပုံ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | ယဉ်ကျေးမှု
လူမျိုးစုအနုပညာကို ကာကွယ်သူ- Bulu Imam သည် အနာဂတ်အတွက် အတိတ်ကို မည်သို့ထိန်းသိမ်းထားသနည်း။
viCHITRA ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်- US အခြေစိုက် စာရေးဆရာ Divakaruni သည် အမျိုးသမီးများကို စာအုပ်များနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသံပေးပုံ
Khyati Trehan ၏ အော်စကာ '22 တီထွင်ဖန်တီးမှုမှလွဲ၍ သူမ၏ 3D ပရောဂျက်များသည် အနုပညာလောက၏ ဟောပြောချက်ဖြစ်သည်။
Guru Nanak ၏ခြေရာအတိုင်း ဗြောင်ခရီးသည် Amarjeet Singh အသက် 61 နှစ်သည် နိုင်ငံ 40,000 နိုင်ငံကိုဖြတ်၍ ကီလိုမီတာ6မောင်းနှင်ခဲ့သည်။
Mandar Apte ၏နေထိုင်မှုအနုပညာကို LA Gangs က မည်သို့လေ့လာခဲ့သနည်း။
International thespian Pankaj Tiwari သည် အမ်စတာဒမ်တွင် အနုပညာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | စာကောင်းပေမွန်များ
IBM ၏ဦးထုပ်တွင် အကောင်းမြင်သမား - The New York Times
VS Naipaul- သူ၏ ခရီးသွားလာမှု၏ ဆည်းဆာနှင့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးသားမှုများ - Business Standard
US တွင် အိန္ဒိယဘုရားကျောင်း ပန်းပုများကို နာမည်ကြီးခဲ့သော ဆွစ်ဇာလန် ဓာတ်ပုံဆရာကို သတိရခြင်း - Scroll.in
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က စည်းကမ်းတိုင်းကို ချိုးဖျက်ပြီး သင်လည်း လုပ်သင့်သည် – Entrepreneur.com
အောက်တိုဘာလတွင် RBI သည် ထပ်တလဲလဲ ငွေပေးချေမှုများကို ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ၏ ငွေပေးချေမှုဂေဟစနစ်သည် ၎င်းကိုပြုပြင်ဆဲဖြစ်သည် - The Ken
အရောင်စုံသောပြည်- အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာကို လှည့်ပတ်ရန် ပထမဆုံး စက်ဘီးစီးသူ၏ မျက်စိဖြင့် အိန္ဒိယ - Scroll.in
(ဤဆောင်းပါးသည် ဦးစွာပေါ်လာသည်။ The New York Times မေလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)
Apple၊ Alphabet၊ Meta နှင့် Microsoft တို့ ကြီးစိုးသော နည်းပညာလုပ်ငန်းတွင်၊ မျက်နှာပြင်များ တုန်ခါသွားစေသည့် ဟမ်ဒရမ်အလုပ် အများစုကို ခေါင်းကြီးပိုင်းကို ထုတ်ခဲသော ကုမ္ပဏီများက လုပ်ဆောင်သည်ဟု အလွယ်တကူ မေ့ထားနိုင်ပါသည်။ IBM ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းကို တဖြည်းဖြည်း ပုံဖော်လာခဲ့သည်။
(ဤဆောင်းပါးသည် မူလက ပေါ်လာသည်။ business Standard ၂၀၂၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်)
Naipaul သည် သမိုင်းကို ပါးစပ်ဖြင့်ရေး၍မရသော ယဉ်ကျေးမှုများကို နားလည်ရန် အခက်အခဲများဖြင့် ရုန်းကန်နေရသည်...
(ဆောင်းပါးကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Scroll.in မေလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်) 1949 ခုနှစ် ဆောင်းဦးပေါက်တွင်၊ အလယ်ခေတ် အိန္ဒိယဘုရားကျောင်း ပန်းပုများ၏ ဓာတ်ပုံပြပွဲသည် နယူးယောက်မြို့၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး အထက်တန်းစားများကြားတွင် ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမှာနေထိုင်တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီပုံတွေဟာ အစောပိုင်းနှစ်တုန်းက ပါရီမှာ ကောင်းကောင်းလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ်။
(ဤဆောင်းပါးသည် မူလက ပေါ်လာသည်။ Entrepreneur.com ဧပြီလ 11, 2022 အပေါ်)
Elon Musk က ဘယ်သူလဲ။ သူက လုပ်ငန်းရှင်လား။ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း။ တွစ်တာ မှင်စာလား။ အညွှန်းများသည် အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာ ၎င်းတို့သည် လူတစ်ဦးထံမှ မျှော်လင့်ရမည့်အရာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်စပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Musk သည် မကြာသေးမီက ကမ္ဘာပေါ်တွင် အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သော်လည်း၊ "ကမ္ဘာပေါ်တွင် သြဇာအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်" သည် ပို၍သင့်လျော်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ငြင်းဆိုလိုပါသည်။ Musk ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ ဖရိုဖရဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ စံနှုန်းတွေကို တမင်တကာ ချိုးဖျက်ပြီး အလှည့်တိုင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေကို စိန်ခေါ်ခြင်းရဲ့ ရလဒ်တစ်ခုပါပဲ...
(ဤဆောင်းပါးသည် မူလက ပေါ်လာသည်။ အဆိုပါကဲန် မေလ 11, 2022 အပေါ်)
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး Apple က တရားဝင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ရပ်တန့် ၎င်း၏ App Store မှ စာရင်းသွင်းမှုများနှင့် ဝယ်ယူမှုများအတွက် အိန္ဒိယဒက်ဘစ်နှင့် ခရက်ဒစ်ကတ်များမှတစ်ဆင့် ငွေပေးချေမှုများကို လက်ခံခြင်း။ ယခု Apple ၏ အိန္ဒိယအသုံးပြုသူများသည် မည်သည့် App Store ကိုမဆို ဝယ်ယူလိုပါက ၎င်းတို့ထံ ငွေထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။Apple က ID ကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ငွေပေးချေမှုစနစ် UPI သို့မဟုတ် အင်တာနက်ဘဏ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ထိုငွေများကို အသုံးပြုပါ...
(ဒီဇာတ်လမ်းက ပထမဆုံးပေါ်လာတာ။ in Scroll.in မေလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်)
သူ့စာအုပ်အတွက် တီဟီရန်မှ ယိုကိုဟားမားအထိ (1888)၊ Thomas Stevens သည် ယနေ့ခေတ်တွင် အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသော စူးစမ်းလေ့လာမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်- အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ဘက်အလျားတစ်လျှောက် စက်ဘီးစီးရန် အခမ်းနားဆုံးလမ်းဖြစ်သည်။ Grand Trunk Road သည် “အာဖဂန်နယ်နိမိတ်ရှိ Peshawar မှ Calcutta အထိ မပြိုကွဲနိုင်သော ပြီးပြည့်စုံမှုရှိသော အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဖြစ်သည်” ဟု Stevens ရေးခဲ့သည်...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | နံပါတ်များကမ္ဘာ
Rocketry: The Nambi Effect၊ Dhuin၊ Alpha Beta Gamma၊ Godavari၊ Boomba Ride နှင့် Tree Full of Parrots အပါအဝင် ၇၅ ကြိမ်မြောက် Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပြသမည့် အိန္ဒိယဇာတ်ကားများ။
242 အကြိမ်ရေ ကျဆင်းခဲ့သည်။
Howard Schultz သည် ဘဏ်များမှ 242 ကြိမ်တိုင်တိုင် ပယ်ချခံရပြီးနောက် စွန့်လွှတ်ခဲ့မည်ဆိုပါက Starbucks (ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ကော်ဖီဆိုင်ခွဲ) ရှိမည်မဟုတ်ပေ။
CoinMarketCap အရ crypto စျေးကွက်တွင်ခန့်မှန်းခြေဆုံးရှုံးမှု။ Bitcoin သည် နောက်ဆုံးနေ့တွင် 10 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားပြီး Ethereum သည် 2020 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားသော်လည်း 16 ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်း ၎င်း၏အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
နိုဘယ်ဆုရှင်နှင့် ကလေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ Kailash Satyarthi က ဝင်ငွေနည်းနိုင်ငံအားလုံးရှိ ကလေးများနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများအားလုံးအတွက် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၅၃ သန်း အာမခံပေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Mukesh Ambani ၏ Reliance Industries ကို ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့သည့် အမှတ်အသားမှာ ၎င်းသည် နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရရှိသည့် ပထမဆုံးသော အိန္ဒိယကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။
ဘဏ္ဍာနှစ် 21 မှ 22 ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှု တိုးတက်မှု။ အိန္ဒိယသည် ဤကိစ္စတွင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးနိုင်ငံများကို အနိုင်ယူခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | မင်းသိလား?
၁၈ ရာစုတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့သော တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် Kanyakumari ခရိုင်မှ ဟိန္ဒူနွယ်ဖွား Devashayam Pillai သည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ၏ ပထမဆုံးသော အိန္ဒိယလူပြိန်းဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက် Biliti Electric Inc သည် Telangana တွင် တစ်နှစ်လျှင် EV အစီးရေ 240,000 ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လျှပ်စစ်သုံးဘီးတပ်စက်ရုံကို တည်ထောင်လျက်ရှိသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ နှင့် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
ဇိမ်ခံဧည့်ဝတ်ကျေပွန်မှု၊ အိမ်ခြံမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လူနေမှုပုံစံစသည့် ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Prince Organization ၏ အိန္ဒိယ-အမေရိကန် CEO Sunil Tolani သည် Elon Musk၊ Jeff Bezos နှင့် Mark Zuckerberg တို့ကဲ့သို့ New York Weekly ၏ 10 ခုနှစ်၏ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၁၀ ဦးစာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
Google သည် Sanskrit အပါအဝင် အိန္ဒိယဘာသာစကား ရှစ်မျိုးအား Google Translate တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ အင်တာနက်ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အွန်လိုင်းဘာသာစကားမျိုးစုံဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့် ဒေသတွင်းဘာသာစကားအရေအတွက်ကို ဆက်လက်တိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်။
အသတ်ခံရသော ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် Danish Siddiqui သည် ၎င်း၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် Pulitzer ကို ယခုအကြိမ် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်သေဆုံးမှုဓာတ်ပုံများကို ရရှိခဲ့သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင် သူသည် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်းကို မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် Pulitzer ကို ရရှိခဲ့သည်။
NASA ရဲ့ လေ့လာမှုအရ ၂၆ မိနစ်ကြာ ကြောင်နပ်ခတ်ခြင်းက စွမ်းဆောင်ရည်ကို ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ တစ်ရေးတစ်မော မောပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်သလဲဆိုတာကို ပြသထားပါတယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | မျက်တောင်များ
အန to တရာယ်ရှိရန်သတ္တိမရှိသောသူသည်အသက်တာ၌မည်သည့်အရာမျှအောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကို သိချင်ရင်၊ သူနဲ့တန်းတူမဟုတ်ဘဲ နိမ့်ပါးသူကို ဘယ်လိုဆက်ဆံလဲဆိုတာ ကောင်းကောင်းကြည့်ပါ။
APJ Abdul Kalam၊ အိန္ဒိယသမ္မတဟောင်း
စဉ်းစားခြင်းသည် အရင်းအနှီး၊ လုပ်ငန်းသည် နည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ ကြိုးစားမှုသည် ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
Maya Angelou၊ အမေရိကန် ကဗျာဆရာ
ကြယ်တွေဆီကို ရောက်ချင်တဲ့စိတ်က ရည်မှန်းချက်ကြီးတယ်။ စိတ်နှလုံးကို မှီတွယ်လိုသောဆန္ဒသည် ပညာရှိနှင့် ဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြစ်သည်။
Rabindranath Tagore၊ ကဗျာဆရာ
ဧည့်သည်အဖြစ် လက်ခံခြင်းအနုပညာ ဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့်သာ အမှန်တရားသည် အောင်နိုင်သူအဖြစ် လာပါသည်။
ဘဝဟာ ပျော်ရွှင်စရာလို့ အိပ်ပြီး အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ နိုးလာတော့ ဘဝက ဝန်ဆောင်မှုလို့ မြင်တယ်။ ငါပြုမူသည်ကိုမြင်လျှင်၊
GLOBAL အိန္ဒိယ | ပြခန်း
မြေပုံပြထားသည်- နိုင်ငံအလိုက် ဆိုလာနှင့် လေစွမ်းအင်
2022 ခုနှစ်တွင် ထိပ်တန်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောအက်ပ်များ
2021 ခုနှစ်တွင် US ရေနံစိမ်းနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်း တင်သွင်းမှုကို မြင်ယောင်ခြင်း။
မကြာသေးမီက ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော Santoor maestro Pandit Shivkumar Sharma သည် 70 နှစ်များအတွင်း Beatles မှ ဦးဆောင်ဂစ်တာသမား George Harrison နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဝိညာဉ်ရေးခရီးအတွက် သူရှိစဉ်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
15 မေလ 2022
United Nations Environment Program ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဟောင်း Erik Solheim သည် Ladakh ၏ Nubra Valley ရှိ ရှေးအကျဆုံးနှင့် အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်သည့် Diskit ကျောင်းဆောင်၏ ဓာတ်ပုံကို မျှဝေခဲ့သည်။
14 မေလ 2022
ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး R Hari Kumar သည် Air Marshal Mel Hupfeld နှင့် တော်ဝင်သြစတြေးလျ လေတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့် စကားပြောဆိုသည်။ အရာရှိနှစ်ဦးသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့် လေ့ကျင့်ရေးနယ်ပယ်များတွင် အပြန်အလှန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ စုစည်းမှု အပါအဝင် ကျယ်ပြန့်သော အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နာမည်ကြီး နည်းပညာဂျာနယ်လစ် Madhumita Murgia သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရန် အားနည်းသည့်နည်းလမ်းများစွာကို မျှဝေထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ကာကွယ်နိုင်သည်ကို ရှင်းပြထားသည်။
Boeing 777 ပျံသန်းသည့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသက်အငယ်ဆုံး အမျိုးသမီး Capt. Anny Divya သည် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးမရှိသော ကတိတစ်ခုနှင့် အဆုံးအဖြတ်ရယူရန် စိတ်အားထက်သန်မှု၏ ခွန်အားနှင့် ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်ရန် တွန်းအားပေးပုံကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင် Sri Sri Ravi Shankar သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာရှိ “Chakras” အမျိုးမျိုး အလုပ်လုပ်ပုံ၊ တစ်ဦးချင်းစီ၏ အရေးပါပုံနှင့် ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဗားရှင်းများဖြစ်လာစေရန်နှင့် Chakras များမှတစ်ဆင့် စွမ်းအင်ကို လမ်းကြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများ၏ ပိုမိုမြင့်မားသောအတိုင်းအတာများကို ရယူအသုံးပြုနိုင်ပုံကို ရှင်းပြသည်။
11 မေလ 2022
ဒလိုင်းလားမားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆိုးမြင်စိတ်များကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ခရီးသည်များ မမြင်ရခဲသော လေယာဉ်အမှုထမ်းများအဖြစ် Emirates လေယာဉ်အတွင်းပိုင်းကို ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
06 မေလ 2022
ဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi နှင့် ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ် Mette Frederiksen တို့သည် ကိုပင်ဟေဂင်ရှိ အိန္ဒိယအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။ ဝန်ကြီးချုပ် မိုဒီသည် ဒိန်းမတ်ရှိ အိန္ဒိယအသိုက်အဝန်း၏ အပြုသဘောဆောင်သည့် အခန်းကဏ္ဍကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြား ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ | အခွင့်အလမ်းများ
H-1B ဗီဇာကိုင်ဆောင်သူများသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လစာအများဆုံးရရှိကြသည်။
ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ် သို့မဟုတ် အီတလီတွင် အလုပ်လုပ်ပါ - ယခု EU နိုင်ငံ5နိုင်ငံတွင် ရရှိနိုင်သော အကျော်ကြားဆုံးအလုပ်အကိုင်များ
31 နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးသော အိန္ဒိယ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ သြစတြေးလျ စီးပွားရေးဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
UK သည် အခြားနိုင်ငံမှ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာများအတွက် ခရီးသွားကန့်သတ်ချက်အားလုံးကို ဖယ်ရှားရန်